प्रचण्डप्रति गोकुल बाँस्कोटाको आक्रामक टिप्पणी : पुष्पकमललाई झारपातले त हेप्छन, यो त गोकुल बाँस्कोटा हो – Butwal 24 News
काठमाडौं, २३ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफू कोहीसँग नडराउने स्पष्ट पारेका छन् । आज (शनिबार) पार्टीको काठमाडौं–काभ्रे सम्पर्क मञ्चको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘म फेरि कोहीसित डराउँदिन्, पुष्पकमलले पनि हेप्नी, हेप्नी ? भनेका छन् अरे, पुष्पकमललाई त झारपातले त हेप्छन, यो त गोकुल बाँस्कोटा हो । नेकपा एमालेको नेता हो । हेप्नी हो । हराईदिने हो ।’ उनले नेपाली जनताले अहिले प्रचण्डको बन्दुक खसालिदिसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘जनताले उनलाई साईजमा ल्याईसके । पुष्पकमल दाहाल खासमा श्रमजिवी वर्गको होईन, दलाल पुँजीपतिको बास्तविक प्रतिनिधि पात्र हुन । र, उनले विनोद चौधरीको निम्तिमात्रै मलाई कति गर्या छन्, यीनका ठूला कुरा, दिनै नमिल्ने लाईसेन्स, दिँदासाथ चार अर्ब ९९ करोड विनोद चौधरीलाई फाईदा हुने, अनि नेपाल टेलिकम ध्वस्त हुने, अनि नेपाल टेलिकमलाई एनसेलसमेत चार अर्ब तिर्ने, अनि विनोद चौधरीलाई सोही लाईसेन्स २५ लाखमा दिने अरे ।
तिमीहरुको कम्फर्टेबल सरकार बनेको छ । अदालत छ । सक्छौ भने कारबाही गर । जेल हाल । हुति छ ? १७ हजार मान्छेको गर्धन छिनाउने अझै लोकतन्त्रवादी ?’ file photo